MGLUAYE'S PAGES ကို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် လက်ဆောင်လေး နောက်တစ်ခုပါ။ လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အနေနဲ့ အချို့က လိပ်စာကို တိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်ပြီး လာလည်ကြတယ်။ အချို့က Google Reader ထဲကနေ လာဖတ်တယ်။ အချို့ကတော့ Google ထဲမှာ MGLUAYE ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပြီးမှ ရောက်လာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအတွက် ကလစ်လေး တစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့ လာလည်နိုင်စေမဲ့ MGLUAYE Toolbar လေး လက်ဆောင် ပေးထားပါတယ်။
MGLUAYE Toolbar မှာ ဘာတွေပါလဲ ဆိုတော့ မောင်လူအေး စာမျက်နှာကို အမြန်ချောပို့ မပါဘဲ ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ ခေါက်ပြီး လာလို့ ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ Email ကို Setting ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် Email Alert က Email အသစ်ရောက်တိုင်း Alert လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ အဖြူရောင် သံစဉ် အင်တာနက် ရေဒီယိုကို ထည့်ထားပေးပါတယ်။ သူ့ဘေးမှာ ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ Font မတူလို့ ဖတ်မရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်စေဖို့ Font Converter ပါပါတယ်။ အဲဒီဘေးမှာ Font Download လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် Zawgyi One Download Link လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူ့နံဘေးမှာတော့ အပျင်းပြေ ဆော့ဖို့ Game လေးတွေ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နံဘေးမှာတော့ သူငယ်ချင်း နေထိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အပူချိန်လေးပေါ့။
နောက်နောက် အလျဉ်းသင့်သလို Update လေးတွေ လုပ်သွားပေးပါမယ်။ မောင်လူအေးဆီကနေ Update လုပ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းဆီမှာ အလိုလျောက် Update ဖြစ်နေမှာပါဗျာ။ Install လုပ်ဖို့ Toolbar ပုံလေးကို Click ခေါက်ပါဗျာ။
မောင်လူအေး စာမျက်နှာကို လာလည်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။ :)
Filed Under : Download, Internet, Present
Happy New Year 2009 to you naw
သာယာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေဗျာ...
utilizing? I'm experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?
my web blog creativus.lv
Check out my web page: froxh.com
You should take part inacontest for top-of-the-line blogs on
Check out my blog post; Www.adoptioneducationclasses.com
my blog; http://www.bjoyful.us/blogs/entry/Golfing-Weekend-Breaks-In-Spain-2013-05-12
Havealook at my web blog ... maltese puppies for sale uk